Home Wararka Miisaaniyad Muddo Kordhin Huwan oo ay Ansixiyeen kuwa aan iyagaba Ansax Dhameystiran...
Miisaaniyad Muddo Kordhin Huwan oo ay Ansixiyeen kuwa aan iyagaba Ansax Dhameystiran ahayn.
Waxay golaha wasiirada ansixiyeen misaaniyaddii sanadka soo socda dowladda ku shaqeyn lahayd. Iyadoo la ogyahay xaaladda cakiran ee labadii gole wasaaradeed ee kala dambeeyey ay dalka geliyeen iyagoo gabay masuuliyadooda ahayd inay xeraan miisaaniyadihii hore ayey haddana waxay ansixiyeen miisaaniyaddii dowladda ku shaqeyn lahayd 2022/23.
Waxaan maqli jirnay baroorta Orgiga ka weyn waa maxay ujeedada miisaaniyad dowlad aan wax miisaan ah dalka ugu fadhiyin inay ansaxsato miisaaniyad ay sidey rabtay ka yeeshay oo aan weligeed la xerin kuwii ka horeyey marka laga reebo middii 2017/18 oo ka timid dowladdii ka horreysay.
Dowladdaas si aysan ugu abuurin caqabad markii ay doorashada soo dhoweyd waxay soo gudbisay miisaaniyad lix bilood ah, taas oa wada xertay dhammaan miisaaniyadaihii ka horreeyey.
Haddabba su’aashan maanka dadka wax akhriyaa ku wareegeysa waxay tahay waa maxay ujeedada miisaaniyaddaan ay hadda ansaxsadeen golaha wasiiradda xilgaarsiinta?
Ujeedada meel fog ma jirto oo waa sidaan sidaan:
Dabin aad u xun oo siyaasadeed oo loo dhigayo dowladda soo socota iyadoo qiimaha iyo mudnaanta lagu cabirayo caqliga dowladda maanta joogta oo weligeed aanu xerin wasiirkeeda maaliyadda miisaaniyadihii kala dambeeyey ee uu horay u soo degsaday Mudane Dr. Aqoonyahan, Abwaan, Xildhibaan Cabduraxmaan Beyle Ducaale oo loo qariyo xafiiskiisa dhexdiisa Dr Beenaaleoo maalinna ku leh maanta waa markii ugu horreysay oo aan heerkaan wanagsan soo gaarno, maalinta xigtana ku leh sagxadda ayaannu naallaa oo haddii aan MW na badbaadiyaa na loo helin ka hor Desember 2022 waa naloo yaabaa ayuu afkiisa ka sheegay.
Waxaad akhriste isweydiin kartaa haddii aadan dhaqaaleyahan ahayn waa maxay dabinka ay dhigi karto dowladdaan? Waxay sameyn kartaa inay kharshka u kordhiso meelo ay iyada rabto, si uu u yeesho saameyn ay sixistiisu ku adag tahay dowladda soo socota sida kordhinta mushaarooyinka shaqaalaha iyo ciidamada iyadoon loo hayn dakhligii lagu jaangooyn lahaa, haddii dowladda soo socotaana ay saxi tagtana ay shaqaalaha iyo ciidamada kacaan dalkuna uu fowdo galo.
Dadka oo shaki weyn lagu abuuray oo la isla dhexmarayo tolow miisaaniyaddaan waxay u sameysteen inay doorashada ku iibsadaan oo waxay rabaa inay iska sii joogayaan weligood.
Inuu jiro qorshe qarsoon oo muddo kordhin ah, tan oo ka marqati kacaeysa sababaha caqabadaha doorashada loogu dhigayo si loo gaaro Febraayo 2022 oo uu Farmajo markaas Qarxin doona qorshihiisa Qarsoon ee dalka lagu hodayo.
Miisaaniyadaan Barlamaan loola noqdo lahayn oo barlamaankii xubnihii ugu horreeyey waa la soo malxiis saartay haddaan waqtiga loo kordhineyn iyagana aysan Farmajo u kordhinayn, isagana uu Rooble u kordhineyn, Rooblana uusan Raamsiga beesha lixaad ee Xalana ku raaxeysaneysa u kordhineyna, iyagana aysan Shabaab awoodda u kordhineyn, Shabaabna ciqaabta iyo cadaabta u kordhineyn shacbiga. Waana silsilad isku xeran oo aan dhowr jeer siyaabo kala duwan uga dignay welisa la fahmi la’ayahay.
Isku soo duub miisaaniyaddana waa fowdo ujeeddooyin gurracan oo isbarkan laga leeyahay. Waayo mucaarid ama awood kale oo u diyaarsan inay ka hortimaado ma jirto oo iyagaaba u kala dhuumanayaa Fahad iyo Farmajo. Dal ba’ayow yaa ku leh?.